Paikady … mora • AoRaha
Paikady … mora
Hatreto aloha, sarotra ny mandainga fa tena miaina ao anatin’ny fahan­trana lalina ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy. Tsy mahagaga raha ifanotofana ny fisian’ny “Tsena mora” isam-pokontany satria tena manampy tokoa amin’ny fiatrehana ny adim-piainana andavanandro izany.
Olana anefa, tsy maharitra ny tsena mora. Mandalo dia lasa fotsiny ihany fa tsy mahasahana ny vahoaka tsy mandadiharona rehetra akory. Noho izany, mila jeren’ny mpitondra fanjakana haingana ary tena maika, izay fomba rehetra hahafahan’ny olom-pirenena mividy ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro nefa sahaza ny fahefa-mividiny amin’ny karama keliny isam-bolana. Izany hoe mandra-pahavitan’ny “velirano” sy ny fampanantenana samihafa nataon’ny Filohan’ny Repoblika, dia tokony hotohizana
hatrany ny “Tsena mora” isam-pokontany. Ary mba tsy hilaharana be dia atao betsaka ny famatsiana, vary, siramamy, menaka, savony, sira, kafe… Ireo no tena antoky ny fiainan’ny mponina isan’andro. Mampaninona moa ny manao izany satria hanome fanampiana aza atao. Azon’ny fanjakana atao ny manafatra vary isaky ny enim-bolana aloha raha tsy mbola mahasahana ny mponina ny vokatra eto an-toerana. Azo atao ihany koa anefa ny mifanaraka amin’ireo orinasa malagasy mpamokatra savony sy menaka ary siramamy hamatsiana ny mpiray tanindrazana. Vokatr’izay, mila mifanaraka ny orinasa malagasy sy ny fanjakana , amin’ny fanamaivanana ny hetra sy izay azon’izy ireo ifampitsinjovana. Amin’izay sady mandroso ny orinasa malagasy, no
mahazo tombony ny mpanjifa. Rehefa ireo koa anefa no maivana, angamba, mba ho maivamaivana ihany koa ny fahantrana e!